KGS oo qaadacday go’aanka FEIT ee HOP103 iyo HOP154 | KEYDMEDIA ENGLISH
KGS oo qaadacday go’aanka FEIT ee HOP103 iyo HOP154
Guddiga Heer Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed (SEIT), ayaa ka hor yimid go’aan ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer Federaal FEIT.
BAYDHABO, Soomaaliya - Guddiga doorashooyinka heer dowlad gobolleed ee Koofur galbeed, [SEIT] ayaa qaadacay, go’aanka guddiga doorashooyinka heer Federaal FEIT, ee ku aaddan nadiijada doorashadii kuraasta HOP103 iyo HOP154.
Guddoomiyaha Guddiga FEIT, Muuse Geelle Yuusuf , ayaa shaly si cad u sheegay in Guddiga doorashada uu horay u joojiyay saddex kursi oo kala ah HOP154, HOP103 iyo HOP086, sidaas daraaddeed aysan marnaba ansax noqon karin doorashadooda.
Hayeeshee, qoraal kasoo baxay SEIT-ka Koonfur Galbeed, ayaa lagu sheegay in HOP103, hore loo fasaxay, isla-markaana aysan jirin cid ka soo dacwootay HOP154, taas oo ka dhigan in ay ansax tahay doorashada kuraasta, waa sida ay hadalka u dhigeene.
“Kursiga HOP103 horaa loo fasaxay, HOP154 cid ka dacwooneysa lama haayo, Guddiga FEIT ha ka shaqeeyo danaha ummadda, doorashadana carqalada halaga daayo”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Guddiga doorashooyinka KGS.
Kursiga HOP154 waxaa hore ugu soo baxday Xildhibaan Sareedo, balse Guddigu FEIT, ayaa sheegay in aan loo marin habraacii rasmiga ahaa, maadama murashax ka mid ah kuwii u tartamayey uusan buuxin shuruudihii murashaxnimada sida ku cad qodobka 3aad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020.
Sareeda Maxamed Cabdalla, oo 29 Nofeembar 2021, Baydhabo loogu boobay Hop154, waxaa malxiis u ahaa Fardowsa Ibraahim Cabdi, oo la sheegay in ay day’deedu ka yartahay 25 sano, taas oo muujineysa in habkii loo maray doorashadiisa aysan waafaqsanayn habraacyada doorashada.
Dhanka kale, warqadda sumadeedu tahay (TXR/GHD/0056/21) soona baxday 27 Noofeembar 2021, ayuu Gudiga FEIT, ku hakiyey in la qabto dorashada Kursiga uu tirsigiisu yahay Hop103, oo baarlamaankii 10-aad uu ku fadhiyay Maxamed Sheekh Cismaan Jawari.
Hayeeshee, Guddiga Maamulka Doorashada heer Koonfur galbeed (SEIT), ayaa gaashaanka u duruuray, warka ka soo baxay (FEIT), waxaana maalin kadib hakintii Guddiga Heer Federaal, Baydhabo lagu qabtay doorashada HOP103, kaas oo loo boobay Maxamed Cali, oo ka mid ah maamulka Laftagareen.
Ma aha markii koobad ee Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka DG KGS, Yuusuf Cabduqaadir Maxamed Baafo, uu si buuxda uga hor yimaado amar ka soo baxay FEIT, wuxuuna hore u sheegay in Guddiga heer Federaal aysan hor istaagi karin doorashada HOP103.
Guddoomiye Jawaari, oo ah musharraxa cabashada gudbiyay, ayaa sheegay in laga hor istaagay xuquuddii dastuurku siinayay isla-markaana loo diiday ka qeyb qaadashada baratanka kursiga HOP103, wuxuuna boobka Baydhabo ka socda ku sifeeyay, “Meel aysan ka fidsaneyn gogol uu nin gob ah wax ka doonto”.
Dec 19, 2018, ayay Kooxda Farmaajo, Cabdicasiis Maxamed Xasan [Laftagareen] u boobeen doorashadii Madaxweynaha ee ka dhacday Baydhabo, taas oo u jeedkeedu ahaa inuu markiisa ugu boobo 77 kursi oo ka kala tirsan labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka oo yaalla Baydhabo iyo Baraawe.